काठमाडौंमा तीन दिने दक्षिण एसियाली हस्तकला महोत्सव हुँदै, कहिले देखि शुरु ?  BikashNews
काठमाडौंमा तीन दिने दक्षिण एसियाली हस्तकला महोत्सव हुँदै, कहिले देखि शुरु ?
२०७४ पुष २८ गते १३:३१ विकासन्युज
काठमाडौं । गरीबी निवारण कोष, नेपालले यही पुस २८, २९ र ३० गते काठमाडौंमा दक्षिण एसियाली हस्तकला महोत्सवको आयोजना गर्दैछ । यो तीन दिने महोत्सवको मुख्य आकर्षण ‘नेपाल-को’ ब्राण्ड हुनेछ । नेपाली कालीगढहरूले बनाएका आकर्षक हस्तकला सामाग्रीलाई ‘नेपाल-को’ ब्राण्ड-दिएर राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ल्याउन लागिएको हो ।
कोषद्वारा सञ्चालित ‘द्वन्द्व प्रभावितहरुका लागि बजार निर्माण परियोजना’ अन्तर्गत संगठित हुँदै विभिन्न सीप सिक्ने र आफ्नाे उत्पादनको बजारलाई विस्तार गर्ने अवसर पाएका नेपाली कालीगढहरूको सिर्जनालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले यो महोत्सवको आयोजना गरिएको हो ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसी भन्छन्, “हस्तकला बजारमा ग्रामीण, विपन्न, भूमिहीन र द्व्रन्द्व–प्रभावित समुदायका कालीगढहरुको उत्पादनको हिस्सा बढाउनु हाम्रो उद्देश्य हो ।” “हाम्रो परियोजनाबाट महिला, अपाङ्गता भएका र द्वन्द्व एवं सामाजिक विग्रहको चपेटामा परेकालगायतका विभिन्न कालीगढहरू लाभान्वित भएका छन्,” उनले भने।
जापानी सामाजिक विकास कोषको सहयोग र विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा दैलेख, दाङ, धनुषा, तेह्रथुम, कपिलवस्तु, म्याग्दी र गोर्खा जिल्लामा सञ्चालित यो परियोजनामा समेटिएका कालीगढहरुले आफ्नाे आय बढाउने र जीवनस्तर सुधार्ने सीप, क्षमता र अवसर पाएका छन् ।
यो परियोजनाअन्तर्गत कोषले ३६५ उत्पादन समूह र १० वटा उत्पादन संघमार्फत ७,५०० भन्दा बढी कालीगढको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्दै तिनको जीवनस्तरमा सुधार गरेको छ । हरेक समूहमा २० देखि २५ कालीगढ आवद्ध छन् र तिनले आ-आफ्नै क्षेत्रमा उद्यम गरेका छन् । उनीहरुलाई मद्दत गर्न कोषले १० वटा साझा सेवा केन्द्र पनि सञ्चालन गरेको छ ।
परियोजनाको सहयोगप्राप्त कालीगढको सिर्जनाको प्रदर्शनीसँगै बिक्री पनि गरिनेछ । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीद्धारा उद्घाटित हुने महोत्सवमा अल्लो, लोक्ता, ऊन, ढाका र माटोका सामाग्रीस“गै मिथिला चित्रकला पनि प्रदर्शन गरिनेछ ।
आफ्ना कलात्मक हस्तकलाको प्रवद्र्धन र बिक्रीका लागि महोत्सवमा सहभागी हुन आउने कालीगढहरुसँग भेट्ने र तिनको अनुभव सुन्ने अवसर पनि महोत्सवले जुराउनेछ । साथै, ग्रामीण अर्थतन्त्र, महिला उद्दमशीलता, सांस्कृतिक उद्योग र सम्भावनाबारे अन्तरसंवाद पनि महोत्सवको अर्को महत्वपूर्ण हिस्सा हुनेछ ।